Roobabka oo khasaaro naf iyo maalba leh ka gaystay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 13, 2013 4:28 b 0
Badhan, November 13, 2013 – Habeenimadii xalay ahayd waxaa roobab qabow wata oo fara badan ay ka da?een deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, roobabka ayaa khasaare dhimasho, dhaawac iyo baragkac leh gaarsiiyey dadka deegaanka.
Maamulka gobolka Sanaag ayaa sheegay roobakii ka da?ay gobollada Puntland ay khasaaro gaarsiiyeen deegaano ka tirsan Sanaag oo ay roobabku gaareeen, waxaa uu sheegay waxyeelada roobabka ay geysteen inay ku jirto dhimasho iyo xoolo fara badan le?day.
?Ilaa 9 ruux baa la waayey qaar waa dhinteen, 1200 oo neef bay roobabku la tageen, beero iyo hanti kalena waa bur-buriyeen.? Ayuu yiri Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo la hadlay idaacada daljir.
Roobabka ayuu sheegay in ay yihiin kuwa awood badan oo ka duwan kuwii hore ee gobolka heli jiray, waxaa uu tilmaamay in ay jiraan meelo aan weli laga war hayn oo ka tirsan gobolka Sanaag ee Puntland, arrintan ayaa ku beegsamaysa xili weli loo gurmanayo khasaare ka dhashay roobab ka da?ay deegaano ka tirsan Nugaal iyo Bari
Dhegeyso: Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Nuur Ciyoon oo u waramay Adna Aways?
Garaad Ciid ?Qurba-joogta Puntland waa in ay deg deg u muujiyaan doorkooda masiibada? (Dhegeyso)